google mifananidzo firimu mupepeti gadziriso ichibuda
Kuru Nhau & Ongororo Google Mifananidzo Movie Mhariri yekugadzirisa kubuda
Google Mifananidzo Movie Mhariri yekugadzirisa kubuda
Image Chikwereti - Iyo Verge
Isu & apos; tazivikanwa kubva Kukadzi kuti Google yanga ichironga kuvhura nyowani uye yakavandudzwa Photo Mhariri, danho rakakura rekuichengeta iri mumakwikwi neICloud Mifananidzo. Nepo kuseka kwekutanga kwakavimbisa yakawanda yemuno mapikicha uye mavhidhiyo ekugadzirisa maficha, iyo yekuvandudza yanga ichinonoka kuburitsa kune maAroid zvishandiso. Vashandisi vane rombo reApple vakagamuchira iyo yekuvandudzwa chinguva chapfuura vanga vachicheka kuno neapo, asi vanhu vazhinji vari kungoisa maoko avo pazviri.
Android Hupenyu ndomumwe wavo, uye akatitendera kuti tione pamusoro peiyo nyowani yekuzvarwa yekushandisa turu suite inowanika kune vateereri ve smartphone. Isu tave nekucheka pane ese mapikicha nemavhidhiyo, granular edits, uye yakawanda yakawanda mesefa. Nomuzvarirwo, unogona kutamba uchitenderedza nezvinhu zvakaita sekupenya, kusiyanisa, kuzadza, nezvimwewo uye zvakare une ganda ganda uye kudzora kwemavara, pamwe neanogadziridzwa tint, mimvuri, uye vignette firita. Zvese izvi kwete zvemifananidzo chete, asi nemavhidhiyo azere, futi! Iwe unogona zvakare kucheka uye kudhirowa sketches kana mameseji ari pamusoro peiyo vhidhiyo, kunyange ichiratidzika kwenguva yese vhidhiyo, uye iwe haugone & apos; kuti iite kuti ioneke pane chaiwo mafuremu.
Kuti ushandise maficha matsva ekugadzirisa, Google Mifananidzo inoda angangoita Android Shanduro 8.0 uye 3GB RAM mufoni yako, iyo isingafanirwe kuve apuro yezvinhu zvakawanda zvazvino zvigadzirwa.
Kunyange ICloud Mifananidzo iriyo huru yekuenda kune vateveri veApple, ichive yakabatanidzwa mune ese maApple 'kamera kamera (uye ichibvumira yechitatu-bato maapplication kuwana nyore kune yako yese iCloud raibhurari), vazhinji vashandisi vanga vachisarudza kushandisa Google Mifananidzo se back-up syncing chengetedzo sarudzo. Nepo Google Mifananidzo yakarasikirwa neimwe yekukwikwidza pamucheto pamusoro peICloud Mifananidzo gore rino, yapedza yavo yemahara gore rekuchengetedza hurongwa (sarudzo dzakabhadharwa ikozvino dzinotanga pa $ 1.99 / mo), izvi zvinogona kungove iko kusunda kunodiwa kuti vashandisi varambe vachishandisa Google & apos; s foto sevhisi.
Google ichine nzvimbo yakawanda yekuvhara kuti ubate kusvika kuICloud Mifananidzo pakombuta, sezvo napp yayo zvinosuruvarisa kushaya mamiriro ekunze. Inokunda mumhuri yayo-yekugovana raibhurari basa, zvisinei, izvo Apple zvisati zvave & apos. Yayo yegore-yakatarwa kumeso kuzivikanwa basa iri zvakare haina kufananidzwa.
akanyanya kuvhurwa mafoni efoni 2015
meseji meseji yakanangana nezviri mukati
AT & T inogona kunge ichirwa hondo inokundikana kurwisa T-Mobile neVerizon munhandare yeUSG
Iwe uri kurasikirwa ne IR blaster pane iyo Galaxy S7 uye S7 kumucheto?
Maitiro ekubhowa Android 4.1+ muSafe Mode
Ehe, yako yekare 18W adapta inobhadharisa iyo iPhone 12 nekukurumidza senge itsva 20W charger
Pic Yakakwana app yeApple inoita kuti zvive nyore kuenzanisa mhando yemhando padivi nedivi
Iwe unogona zvakare kugonesa iyo mbiri-tap-yekumutsa mashandiro pane yako yakadzika midzi Nexus 6, apa & apos; s sei
PSA: Masikati Ekuchengetedza Nguva inotanga na2am Svondo mangwanani; foni yako inofanira kuzvigadzirisa maererano